ဇော်အောင်(မုံရွာ) - မြန်မာနဲ့ ကိုရိုနာစစ်နေသမျှ - MoeMaKa Media
Home / Coronavirus / Currents / Features / Zaw Aung (Mon Ywa) / ဇော်အောင်(မုံရွာ) - မြန်မာနဲ့ ကိုရိုနာစစ်နေသမျှ
ဇော်အောင်(မုံရွာ) - မြန်မာနဲ့ ကိုရိုနာစစ်နေသမျှ
Coronavirus, Currents, Features, Zaw Aung (Mon Ywa)
ကိုရိုနာ TEST များများလုပ်ဖို့
ရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ အကြိတ်အနယ် ကြိုးစာချိန် တရုပ်.WHO.အမေရိကန် ခေါင်းဆောင်များ စိတ်ထိန်းပြောဆိုကြဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ မီဒီယာ နဲ့ တစ်ဦးခြင်း တင်ပြမှုများလဲ ထိန်းရပါမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပုသိမ်ဆေးရုံအုပ် ကြီး အမြင်အရ ဇူလိုင်လမှာ ဖြစ်ပွားနှုန်း များလာမယ် မှန်းဆပါတယ် ဆိုတော့ နောက် ၄လ အထိ ကူးစက်နှုန်း ပိုများမှာ စိတ်ပျက်ကြမယ်။ လက်ရှိ အခြေအနေ မြန်မာပြည်က 18/4 မနက် ထုတ်ပြန်ချက်အရ 94 ဦး ပိုးတွေ့ပြီး ..5 ဦးသေဆုံး ပါတယ်။
တရုတ် Test အဖွဲ့မြန်မာတရုတ်ပညာရှင်ပြည် ကူညီဖို့ တရုတ်ပညာရှင်အဖွဲ့(11-April) ရောက်လာပြီ ဆိုတော့ သူတို့ အကူညီ. ပစ္စည်းများကြောင့် Test တစ်နေ့ ၄၀၀ အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်လို ဝမ်းအလွန်သာ မိတယ်။ ဗီယက်နမ်. စင်ကာပူ. ထိုင်း Test မမှီပေမဲ့ လာအိုနိုင်ငံ ထက်တော့ Test စုစုပေါင်း အရေအတွက်မှာသာသွားပါပြီ။.
အမေရိကန် Test စက်တလုံးကိုရိုနာ ရောဂါပိုးရှိ၊ မရှိကို Automatic နည်းလမ်းဖြင့် တိကျမြန်ဆန်စွာ ၈ နာရီအတွင်း လူပေါင်း ၃၈၀ ကျော်နှင့် ၂၄ နာရီအတွင်း လူပေါင်း ၁၃၀၀ ကျော်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သော Cobas 6800 Analyser စက်တလုံးနှင့် ယင်းစက်နှင့်တွဲဖက်၍ လူအယောက် ၁၁၀၀ ကျော်စစ်နိုင်သည့် ရောဂါရှာဖွေရေးဆေးရည် Reagent (made in USA) တို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း 18-April (ယနေ့) ရောက်ရှိမည်ဖြစ် ကြောင်း ကျန်းမာရေးဌာန ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးကပြောပါတယ်။
ထို ရောဂါစစ်ဆေးသည့်စက်အပါအဝင် ကျပ်သိန်း ၈၀၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိ ပစ္စည်းမများကို AA Medical Products Ltd မှ 5-April မှာလှူဒါန်းခဲ့တယ်။ ယင်းစက် US FDA မှတ်ပုံတင်ရရှိပြီးဖြစ်ပြီး စက်ရောင်းတဲ့ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ မှ အသုံးပြုဖို့ အမြန်ဆုံး သင်တန်းပို့ချ ကြိုးစားကြမှာပါ။
Test တရုပ်အကူညီ အထူး ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။..
ကုမဏီက လှုဒါန်းတဲ့ အမေရိကန် စက်ကြီးမှာ Test Kit တစ်ခု $200 (ကျပ် ၃သိန်း) ဆိုတော့ မချမ်းသာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ တခါစစ် ဆေးရည် $200 x လူ1400 ဦး = $280000 (သိန်း ၄၂၀၀) နဲ့ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၊ စက်အပိုပစ္စည်း၊ စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်..စသဖြင့် ဈေးအလွန်ကြီးမှာပါ။ ကျနော်က ဒေါ်လာ သန်းချီတဲ့ စက်ကြီးများကို ဝယ်.သုံး.ပြင်ထိန်း အတွေ့ကြုံရှိ.. Test ကုန်ကျစရိတ် မလိုအပ်ပဲ ကြီးနေမှာ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ကိုဗစ်ရံပုံငွေ ကိုလဲ အကျိုးရှိအောင် သုံးစွဲစေချင်ပါတယ်။ လှုတဲ့ အလှုရှင်လဲ ဒါတွေ သိမယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
Test နည်းလမ်းများမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကမ္ဘာ့ အစဦး စမ်းသပ်နည်းကိုတော့ Test Kit ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းထုပ်နဲ့..လူထံမှနမူနာများ တစ်ဦးချင်း ရယူ စမ်းသပ်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး ရှိပေမဲ့ အောက်ပါ နည်း၂ခု ကို သုံးကြပါတယ်။
... Reverse Transcription Polimerase Chain Reaction (RT-PCR)
... Antibodies IgN, IgG immune
တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံကြီးများကတော့ Antibodies နမူနာ တစ်ခါစစ် ထောင်ချီစက်ကြီးများ တီထွင် ထုတ်လုပ် ရောင်းချနေကြပါပြီ။ လူရဲ့ လက်ညိုးထိပ် ဖော်ပြီး သွေးကို နမူနာယူတဲ့ Test Kit များက ဈေးပိုကြီးပါတယ်။
... နှာခေါင်းအတွင်း Nose Swab
... လည်ချောင်းတွင်း Thriat Swab
... Assays အဖြစ် သွေး Blood, လက်ချောင်း ထိပ်မှ သွေးဖောက်(Finger prink), သွေးရည်ကြည်(Serum) များကို ရယူ စစ်ဆေးပါတယ်။
တောင်ကိုးရီးယား နိုင်ငံက Test အများဆုံး လုပ်ပြီး ပိုးတွေ့သူများနဲ့ ထိတွေ့သူများကို ထိန်းချုပ်ရာမှာ အထူးအောင်မြင်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မဲ့ လူများအတွက် Drive Thriugh Test နေရာ များစွာ. တံထွေး နမူနာ ယူစစ် ပေးပါတယ်။ စစ်ပြီး ပြန်သွားရင် မိနစ်အနည်းငယ်မှာ ရလဒ် မက်ဆေ့ ထုတ်ပေးပါတယ်။
အစ္စရေးနိုင်ငံက တီထွင်တဲ့ တစ်ခါစစ် လူထောင်ချီစစ်တဲ့နည်း.. နမူနာ. 64 ခု အုပ်စုကို တပြိုင်ထဲ စစ်တယ်။ ပိုးတွေ့မှ 64 ခုကို ပြန်စစ်တဲ့နည်းပညာ နဲ့ စက်ကြီးများ တီထွင် Test အမြောက်အများ လုပ်နေကြပါပြီ။
ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်နိုင်ငံမှ လူဦးရေရဲ့ ၁၀% Test မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။
Test လုပ်ဖို့ တစ်ခါစမ်းရင် ဒေါ်လာ $50 ကနေ $200 အထိ ကုန်ကျပါတယ်။ အခုဆို ၅မိနစ်အတွင်း ပိုးတွေ့/မတွေ့ သိနိုင်ကြပါပြီ။
မြန်မာပြည်က Test များများ မလုပ်နိုင်ခြင်းက ပထမပိုင်းမှာ ရောဂါလက္ခဏာ ပြသူ နည်းလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့ အမေရိကန် မှာတောင် လက္ခဏာပြတိုင်း Test လုပ်မပေးပါဘူး။ ဆရာဝန်မှ ထောက်ခံပြီး Test စစ်ဆေးတဲ့စက်လည်း ရှိမှ စမ်းနိုင်ပါတယ်။
မနေ့က ပုသိမ်ဆေးရုံကြီးက လက္ခဏာပြ လူနာ၂ဦး ထံမှ နမူနာယူပြီး ဆေးရုံဝန်ထမ်းက ရန်ကုန် သယ်ပြီး စစ်ပါတယ်။ ၂ရက်အကြာ ပိုးမတွေ့ ဆိုတော့ ပုသိမ် မြို့သားများ ဟေး ကနဲ ဝမ်းသာကြပါတယ်။ မြစ်ကြီးနားက လက္ခဏာပြလူနာ နမူနာကို နီးတဲ့ တရုပ်ပြည် စစ်ဆေးတာ ပိုးမတွေ့ ဆိုလို့ မြို့သားတွေ ဟေးကနဲ ပျော်ကြပါတယ်။
ပိုးတွေ့တဲ့ ကွန်ဒို နဲ့ လမ်းတွေကို လော့ဒေါင်း လုပ်နေပါပြီ။ နေထိုင်သူများ အပြင်မထွက်ရတော့ပါ။ ဖုန်းနဲ့ Map ကြည့်နိုင်ပြီး ပိုးတွေ့တဲ့ နေရာများ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ကြည့်နိုင်ပါပြီ။
Test Data များကို
Worldometer ဝက်ဆိုက်မှာ အချိန်နဲ့အမျှ မှတ်တမ်း အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
* လူတသန်းတွင်.စစ်ဆေးနှုန်း..Myanmar...71 ဦး ဆိုတော့ အာစီယံမှာ အနည်းဆုံး နိုင်ငံပါ။
ပိုးတွေ့နှုန်းဥဗရာပနိုင်ငံတွေမှာ Test လုပ်ရင် ပိုးတွေ့နှုန်းက 20% အထက် ရှိပါတယ်။ အာစီယံနိုင်ငံများမှာ မလေးရှား(14%), အင်ဒိုနီးရှား(16%), ဖိလစ်ပိုင်(6%) ရှိပြီး ကျန်နိုင်ငံများက 3%ပဲ ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက 85/3883=2.1% ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက်အလက်အရ မြန်မာနိုင်ငံက ထိုင်းနိုင်ငံလို Test 100498 လုပ်ပြီးရင် ပိုးတွေ့သူ 2.1% (2110 ဦး) ဆေးရုံတင်ရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စရိတ်ကြီးလို့ Test များများ မလုပ်နိုင်ပါ။ တနေ့ လူ ၁ထောင် စစ်နိုင်ရင်တောင် ၃လကြာမှ ထိုင်း ယနေ့လုပ်ပြီးတဲ့ Test 1သိန်း မှီပါမယ်။ ဒါကြောင့် Silent Carriers (ပိုး ရှိ ပြီး Test မလုပ်ပဲ ကျန်းမာ သွားလာနေသူများ) များစွာ ရန်ကုန်မှာ အများဆုံးရှိနေ မှာပါ။
အချက်လက်အရဗီယက်နမ် က အများကြီးစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ သေဆုံးသူမရှိ။ အတုယူစရာကောင်းပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက စစ်ဆေးမှု 3883 ဦး. ဖြစ်ပြီး..ပိုးတွေ့မှုလည်း အနည်းဆုံး ပဲရှိတာကြောင့် အခြေအနေကောင်းပါတယ်။
မြန်မာတပြည်လုံး ပြည်ပပြန်လာသူများကို ကွာရန်တိန်း စင်တာများမှာ 21 ရက် ထားသူပေါင်း 80000 ဦး မှာ ၁ယောက်ပဲ ပိုးတွေ့ပါသေးတယ်။ မကြာခင် အများကြီးပေါ်လာမယ် ခန့်မှန်း ပါ တယ်။ 18-April စုစုပေါင်း.. 94 ဦး ပိုးတွေ့ပြီး ..5 ဦးသေဆုံးပါပြီ။
မကြာခင် ကိုရိုနာကပ်ကြီး ကျော်လွှားသွားမှာပါ။ လောလောဆယ် ရောဂါကူးစက်မှု နှုန်းကို ရော့နည်း. ရပ်တံ့သွားဖို့ ကွာရန်တင်း နဲ့ ဟုံးစတေး (Quarantine & Home Stay) လိုက်နာကြဖို့။ အပြင်ထွက်ဖို့ လိုရင်လဲ နှခေါင်းစီးတပ်ပြီး လူစုဝေးရှောင်ဖို့၊ အိမ်မှာလဲ ခပ်ခွာခွာ နေပြီး ဆပ်ပြာနဲ့လက်ဆေး၊ ဧည့်သယ့်လက်မခံကြဖို့.၊ ခန္တာစိတ်ဝိညာဉ် အားကောင်းလာဖို့ .အစားအသောက်နဲ့ ဘုရားတရား အချိန်ပေးကြဖို့ စသဖြင့် လိုက်နာစရာတွေ ရှိပါတယ်။.. တနေ့မှာ ကျနော်တို့ ရဲ့ ခန္တာလဲ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ် ဝင်လာမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ ခန္တာကိုယ်ထဲက Anti-virus ဘက်တီးရီးယားများ တိုးပွားပြီး ဒီရောဂါ ကပ်ကြီးကို ကျော်လွှားမှာပါ. လို့ အစ္စရေးကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး အားပေးစကား အတိုင်း ဖြစ်လာမှာပါ။
18-4-2020 11:59pm GMT
🇮🇩 အင်ဒိုနီးရှား တွေ့ 5923, သေ 520,
🇵🇭 ဖိလစ်ပိုင် တွေ့ 5878, သေ 287,
🇲🇾 မလေးရှား တွေ့ 5251, သေ 86,
🇸🇬 စင်ကာပူ တွေ့ 5050, သေ 11,
🇹🇭 ထိုင်း တွေ့ 2700, သေ 47,
🇻🇳 ဗီယက်နမ် တွေ့ 268, သေ 0,
🇧🇳 ဘရူနိုင်း တွေ့ 136, သေ 1,
🇰🇭 ကမ်ဘောဒီးယား တွေ့ 120, သေ 0,
🇹🇱 အရှေ့တီမော တွေ့ 4, သေသူ 0,
🇲🇲 မြန်မာ၊ .တွေ့ 94, သေ 4,
🇱🇦 လာအို၊ .တွေ့ 19, သေ 0,
Data များကို Worldometer ဝက်ဆိုက်မှာ အချိန်နဲ့အမျှ မှတ်တမ်း အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။.မြန်မာအစိုးရ လည်း IT့ညာ တိုးတက်လာပါပြီ။ ဗွီဒီယို ဆွေးနွေးပွဲများ ရန်ကုန်အစိုးရ က လုပ်ဆောင်နေသလို 15-April ကစပြီး အစိုးရဝက်ဆိုဒ် https://www.mohs.gov.mm/ မှာ.မြန်မာပြည် ကိုဗစ်အခြေအနေ အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်နေပါပြီ။
ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များက ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်ဖို့... ကွာရန်တင်း (or) လော့ဒေါင်း
... Test (Contact Tracing)
ကာကွယ်ရေးကို အထူး တင်းကြပ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးဗိုးရပ်စ် ပျိုးကာလ ၁၂ရက် အနည်းဆုံးကြမှ ရောဂါ လက္ခဏာ ပေါ်လာပြီး၊ ကူးစက်နှုန်း အင်မတန်မြန်လှတဲ့ ကပ်ရောဂါကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သေနှုန်းကတော့ အသက်ကြီး ခံနိုင်ရည်မရှိသူများပဲ သေတာများပါတယ်။ အသက်၆၀ အောက်ဆိုရင် ခုခံအား ပဋိဇီ၀ InG , IgG များကို လူက ထုတ်ပေးနိုင်လို့ ဗိုင်းရပ်ပျောက်ကင်းပါတယ်။ ပြသနာ ဧရာကြီးက ကုသရင် အလွန်ငွေကြေးကုန်ကျမှု များလှပါတယ်။ သွေးရည်ကြည် ပဋိဇီ၀ ဆေးများနဲ့ ကုသတာ အောင်မြင်နေတယ် ကြေငြာကြတယ်။ ကမ္ဘာ့ ဆေး ကုမ္ပဏီပေါင်း ၇၀ ကျော် နဲ့ အစိုရများက ကာကွယ်ဆေး ထုတ်ဖို့ အကြိတ်အနယ် ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
တရုပ်နိုင်ငံက လော့ဒေါင်း (ပိတ်ဆို့) ၃လ လုပ်တာနဲ့ ကူးစက်နှုန်း ထိန်းချုပ်လိုက်ပါပြီ။
အမေရိကန်နဲ့ဥရောပ တွေကတော့ နောက်ကျသွားလို့ အတုံးအရုံးပါပဲ။
​မြန်မာပြည်က 94 ဦး ပိုးတွေ့ပြီး ..5 ဦးသေဆုံး အခြေအနေ ကောင်းနေဆဲပါ။ ဒါပေမဲ့ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ များများ Test ရပါမယ်။
Test အကြိမ်ပေါင်း 3883 ဦး လုပ်ဖြစ်တာ တရုပ် အဖွဲ့ကို ကျေးဇူးတင်စရာပါ။ ရောဂါ ကူးစက်နှုန်း ကျဆင်းဖို့ Q ကွာရန်တင်းနဲ့ Mask နှခေါင်းစီး အရေးကြီးသလို.. Test အကြိမ်များများ လုပ်ဖို့ လိုပါကြောင်း စဉ်းစားမိတာ ရေးလိုက်ရပါတယ်။
မြန်မာပြည် ကံကြမ္မာ ဆက်လက် ကောင်းပါစေ။
မြန်မာအစိုးရ.လက်ရှိ Test.Method . ..Polimerase Chain Reaction (PCR) မလွယ်လှပါ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157439758708472&id=755653471
ဇော်အောင်(မုံရွာ) - မြန်မာနဲ့ ကိုရိုနာစစ်နေသမျှ Reviewed by MoeMaKa on 9:00 AM Rating: 5